Qurxinta Iyo Daryeelka Gacmaha - Daryeel Magazine
Qurxinta Iyo Daryeelka Gacmaha
Dumar badan oo inaga mid ahi waxay aad uga shaqeeyaan qurxinta wajiga iyo timaha, iyagoo ilowsan gacmahoodu inay yihiin quruxda iyo caafimaadka jidhka kuwa ugu sareeya, waxaa hubaala gabadha xijaaban quruxda jidhkeeda iyo caafimaadkiisa in laga qiyaaso gacmahooda. Cidiyaha oo la dhereeyo oo si qurux badan loo jaro kaliya maaha quruxda gacmaha, gacmaha oo xine (cilaan) la mariyo waa qurux soo jiidasho leh oo ay dumarka soomaaliyeed caan ku noqdeen. Xinaha kaliya oo aad mariso gacmahaaga kuma filna, gacmaha gabadhu waxa ay kaga duwan yihiin gacmaha nimanka ee la isku raacaay waa inay yihiin gacmo jilicsan oo aan qalafsanayn, gacmo marka la taabto la dareemo naxariis iyo dabacsanaan. Hadaba sideed ku gaadhi kartaa in gacmahaagu ay noqdaan ku naxariis iyo qurux u saaxiib ah.
-Isbar inaad gacmahaaga duugto (Massage) markastood fursad u hesho.
-Aad uga ilaali gacmahaaga alaabta guriga lagu nadiifiyo ee ay ka buuxaan kiimikadu sida jaafeelka iwm.
-Ka ilaali gacmahaaga inay ka soo uraan basal iwm, waxaad isticmaashaa sabuun ay ku jirto liin dhahaan, hadii aadan heli karina waxaad ku xoqdaa gacmaha liindhanaanta diirkeeda iyo biyaheedaba, kadibna biyo ku maydh waxaad arkaysaa urtii oo isbadashay.
-waxaad isku dartaa 1 qaado/malqacad oo saliid saytuunka ah (olive Oil), 1 qaado oo sonkor ah iyo 1 qaado oo liin dhanaan ah kadibna isku qas oo si fiican u mari gacmahaaga, kadibna iska maydh iskana qallaji adigoo isticmaalaya towel nadiif ah. way kuu jilcayaan gacmahaagu, mad-madowguna wuu kaa fuqayaa.
Daryeelka Gacmaha Qalalan Caalamadaha Soo Bixidda Ilkaha Caruurta Iyo Daryeelka Ay U Baahan Yihiin Daryeelka Bishimaha Iyo Cadeynta Ilkaha Bunka Iyo Qurxinta Wajiga Dumarka